I-Anabolic Steroid bulk powder eluhlaza RFQ
Ungalifaka kanjani i-oda elivela kithi?
Njengoba iwebhusayithi yethu ingenawo umsebenzi woku-oda ku-inthanethi, ngakho-ke ama-oda enziwa ngama-imeyili noma nge-Whatapp:
❶ Sicela usazise ukuthi yimiphi imikhiqizo oyidingayo, kanye nenani lomkhiqizo ngamunye.
❷ Sizokunikeza intengo engcono kakhulu enezindleko zokuthumela ngokushesha.
❸ Uma ucabanga ukuthi intengo iyakusebenzela, ungakhetha indlela yokukhokha ukuze wenze inkokhelo. (singavuma ukudluliswa kwebhange kanye neBitcoin, Tether)
❹ Iphasela lakho lizopakishwa futhi lithunyelwe phakathi namahora angu-12 ngemva kokuqinisekiswa kwenkokhelo.
❺ Inombolo yokulandelela kanye nesithombe sokupakisha kuzonikezwa zingakapheli izinsuku ezi-2 ngemva kokuthunyelwa kwephasela.
❻ Ungakwazi ukulandelela iphasela ku-inthanethi futhi sizokwazisa lapho iphasela lifika endaweni.
❼ Thola iphasela ngempumelelo.
Indlela yokuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo?
Sinelebhu ye-HPLC nethimba labasebenzi be-QC. I-COA, HPLC, HNMR kanye nemibiko yokuhlola ehlobene iyatholakala. Amaphepha okuhlola ngamalebhu ezinkampani zangaphandle azonikezwa isikhathi nesikhathi.
Ngilikhokhela kanjani i-oda?
Intambo yasebhange, bitcoin, tether(USDT).
Hlobo luni lwemeyili oyisebenzisayo nesikhathi sokulethwa?
Kuya ngezwe lakho/ikheli lokuthunyelwa kwempahla. Njengokuvamile, i-Fedex, i-DHL, i-EMS, i-HKDHL, i-HKEMS, ulayini othile okhethekile onganikezwa. Isikhathi sokulethwa sincike ezindleleni zokuthunyelwa, kuzothatha izinsuku zokusebenza ze-8-15 nge-Fedex noma i-DHL, kungase kudingeke izinsuku zokusebenza ezingu-18-25 ngomunye ulayini.
Kuthiwani ngezinga lempumelelo yokulethwa kwamaphasela?
Ukupakisha kwethu izimpahla ngeke kuqukathe noma yiluphi ulwazi lwama-hormone futhi kungathunyelwa ezindaweni ezahlukene zase-china. Njengamanje, izinga lokugunyazwa kwempahla esilithumela e-United States naseYurophu lingama-99%, Ngokuqondene neCanada, i-Australia, iBrazil yendawo enenani eliphakeme kakhulu, sinezindlela ezintsha zokudlula amasiko. Ukuthumela kabusha inqubomgomo ngokuphelele kwezinye izindawo nakho kuhlinzekiwe.
Wonke ama-oda wempushana yethu eluhlaza angabuyiselwa imali ngaphambi kokuba izimpahla zithunyelwe. Kuzo zonke izinkokhelo eziya ku-AASraw, ziqinisekisiwe ukuhoxiswa, ukukhokha, ukudlulisa, nanoma yini esingayenza phakathi neminyaka engu-5.
Ingabe kukhona umkhawulo wenani le-oda elincane?
Yebo, i-min order ingu-10-100g, kuya ngemikhiqizo ehlukene.
Ingabe akhona amasampuli amahhala?
Cha, asiwakhiphi amasampula. Kodwa singasekela i-oda lesampula ngaphambi kwe-oda lenqwaba. Izindleko zesampula(izindleko zokuthumela azifakiwe) zizodonswa ku-oda lakho elilandelayo.
Ngingathola izaphulelo nge-oda lenqwaba?
Kunjalo. Isaphulelo esikhulu uma i-oda lakho selifike ngenani elithile. Ngiyaqiniseka ukuthi intengo ngeke ivimbe ukusebenzisana kwethu. Esikufunayo ukwakha ukubambisana kwesikhathi eside namakhasimende ethu futhi sizozama ngakho konke esingakwenza ukusekela amakhasimende ethu ukuze athole ibhizinisi elengeziwe.
Impela, singabakhiqizi be-steroids futhi sinemboni yethu, yonke imikhiqizo inohlelo lokukhiqiza njalo ngonyaka.Ngaphezu kwalokho, impahla yethu eluhlaza endaweni yokugcina impahla yayihlelwe futhi ilawulwa uhlelo, oluzoqinisekisa ukuhlinzekwa ngesikhathi.